Wasiiro DF oo Garowe u yimi Dastuurka Puntland
17 Apr 17, 2012 - 10:29:42 AM
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Gen.Cabdisamad Cali Shire ayaa galabta 17,April 2012 duleedka Garowe ku soo dhaweeyey wafdi ka socday DF Somalia uuna horkacayey raysal wasaare kuxigeenka ahna wasiirka ganacsiga Cabdiwahaab Ugaas Xuseen.
Wasiiro ka tirsan Puntland sida Caafimaadka Dr.Cali Cabdulaahi ,Gaadiidka & Hawlaha guud Eng.Daahir Xaaji Khaliif,Beeraha Eng.Maxamuud Xaaji Salax iyo Deegaanka Cabdiqani Yuusuf ayaa wafidgan ka qaybqaatey soo dhaweyntooda waxana weheliyey Ugaaska Wasiiru dawlayaal ka tirsan xukuumadda Somalia.
Xildhibaan Cabdirisaaq Juurile oo kamida mudanayaasha barlamanka Puntland ayaa wafidga qayb ka ahaa.
Ujeedka socdaalka wafdigani Garowe ku yimid ayaa lagu micneeyey ka qaybgalka munaasabada daaha lagu soo rogayo afti u qaadida dastuurka Puntland oo lagu wado inay beri ka dhacdo hoolka Barlamanka Puntland ee Garowe.
Waxana la filayaa in masuuliyiin kala duwan iyo wakiilo ka socda Beesha Caalamka iyo Qaramada Midoobeyba ka soo qaybgalayaan munaasabada ansixinta dastuurka Puntland.
Maalmihii lasoo dhaafey ayaa ergo gaareysa 480xubnood oo laga kala soo xuley dhamaan gobollada Puntland waxay falanqaeyn iyo doodo ka yeelanayeen qodobada uu ka koobanyahay dastuurka Puntland.
Halkan ka daawo sawirada soodhaweynta wafdiga DF Somalia